Maarso 8 caqabad, AirPods Max cusbooneysiin iyo wax badan oo dheeri ah. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Maarso 8 caqabad, AirPods Max cusbooneysiin iyo wax badan oo dheeri ah. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka muhiimka ah oo buuxa wararka xanta ah ee ku saabsan dhacdada ay Apple isku diyaarinayso bisha soo socota ee Maarso 23 sida ay qoreen inta badan warbaahinta. Toddobaadkan waxaan ku aragnay dhowr war oo muhiim ah dunida Apple dabcan waxaan dooneynaa inaan ogaano inaan soo bandhigi doonno iyo in kale.
Runtu waxay tahay in usbuucan uu ahaa mid mashquul badan xitaa iyadoo a Cusbooneysiinta AirPods Max ka mid ah warar iyo warar kale oo badan oo ka socda dunida Apple.
Waxaan ku bilaabeynaa wararka ku saabsan Caqabada Apple ee aan sanad walba heysano 8-da Maarso, Maalinta Caalamiga ee Haweenka. Sidii ay u dhici jirtay sannad kasta, shirkaddu waxay ku darsataa caqabaddan waxqabad ee adeegsadayaasha Apple Watch tanna waxa lagu gaadhay in dadku waxyar u dhaqaaqaan oo ay caafimaad yar helaan Ma heshay billadda?
Waxyaabaha kale ee xiisaha leh toddobaadkan ayaa ah imaatinka nooca rasmiga ah ee macOS Big Sur 11.2.3 dhammaan isticmaaleyaasha. Noocani Apple wuxuu hagaajiyay dhowr dhibaato oo muhiim ah oo xagga amniga ah sidaas waa wax xiiso leh in qalabka lagu cusbooneysiiyo noocaan.
Hadalkiina cusbooneysiinta kama iloobi karno nooca rasmiga ah ee rasmiga ah ee AirPods Max. Sameecadaha dhagaha ee Apple ayaa helay nooc cusub oo firmware ah waxaana macquul ah in dhibaatooyinka qaar ee ku saabsan ismaamulka kuwaan la xaliyo, in kastoo faahfaahinta nooca cusub lama yaqaan.
Si loo dhammeeyo koobankan kooban qaar ka mid ah wararka ugu caansan ee toddobaadkan, ma seegi kartid xanta ama wararka ku saabsan gaariga Apple. Hadda waxay u muuqataa taas Foxconn iyo Magna ayaa mas'uul ka noqon lahaa sameynta gaarigaan Apple. Xan cusub oo aan rasmi ahayn oo aan arki doonno isbeddelkeeda waqti kadib. Wixii ku saabsan gaariga Apple waxaa jira warar badan maanta laakiin ma jiro wax la taaban karo ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Maarso 8 caqabad, AirPods Max cusbooneysiin iyo wax badan oo dheeri ah. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple waxay gaari doontaa qiime dhan 3 bilyan oo ay ugu mahadcelineyso baabuurkeeda korontada ku shaqeeya
Disney + waxay dhaafeysaa 100 milyan oo macaamiil ah